Ra'iisal-wasaaraha Somalia oo hortegaya baarlamaanka - BBC Somali
Ra'iisal-wasaaraha Somalia oo hortegaya baarlamaanka
Image caption Ra'iisal-wasaare Omar Abdirashid
Ra'iisal-wasaaraha Somalia, Omar Abdirashid Sharmarke, ayaa la filayaa in uu hortago baarlamaanka dawladda ku-meel-gaadhka ah, fadhi uu ku yeelanayo magaalada Muqdishu maanta.
Sida uu shalay fadhiga baarlamaanka ka dhex sheegay sii-hayaha xilka guddoomiyaha, Abdiweli Mudey, ahna guddoomiye-ku-xigeenka kowaad ee baarlamaanka dawladda ku-meel-gaadhka ah ee somalia, xukuumadda ra'iisal-wasaare Omar Abdirashiid Sharmarke waxay ballansatay baarlamaanka, oo ay ogolaatay inay hortimaaddo maanta oo Axad ah.
Image caption Baarlamaanka Somalia
Waxanu intaasi ku daray Mudane Abdiweli, in tani ay ka dambaysay codsiyo hore baarlamaanku ugu diray dawladda oo loogu yeedhayo ra'iisal-wasaaruhu in uu hor yimaaddo baarlamaanka, si loola xisaabtamo.
Hadii suurtogashana, waxay noqonaysaa markii ugu horraysay ee xukuumada Omar Abdirashiid Sharmarke ay si rasmi ah u hortimaaddo baarlamaanka, oo lala xisaabtamo, ilaa iyo intii lagu soo asaasay dawladdan ku-meel-gaadhka ah dalka Djibouti, sanaddii 2008.
Dhinaca kalena, xildhibaanno badan oo baarlamaanka ku jira ayaa beryahani danbe si weyn ugu ololaynayey mooshin ku baaqaya in xuuumadda loo yeedho, qaarkodna waxay codsanayeen in loo qaado cod kalsooni ah.
Dhawaanna raiisal-wasaaruhu wuxu wax ka bedeley golihiisii wasiirada, oo uu qaar cusb ku soo daray, meelo banaanaana soo buuxbuuxiyey.
Laakiin xubnaha qaar ee baarlamaanka ayaa ku doodaya in dawladda iyo xubnahan cusubba loo qaado cod kalsooni ah oo la ansixiyo, halka raiisal-wasaaruhu uu qabey hadda ka hor in aan loo baahayn cod baarlamaanku haatan ku ansixyo isku shaandhaynta dawladda ee uu sameeyey.
Mudanayaal badan oo kale waxay dhaliilsan yihiin wax qabadka dawladda ilaa waqtigii la soo dhisay, ha noqoto xagga ammaanka, dib-u-heshiisiinta, ciidamada iyo dhaqaalaha intaba.
Dhinaca kale, madaxweynaha Somalia, sh Shariif Sheikh Ahmed, oo isa ka so laabtay safar debadda uu ugu maqnaa toddobaadyadani, ayaa shalay ugu baaqay baarlamaanka Somalia in la ahaado mid, lana taageero dawlada oo lala shaqeeyo, si looga baxao dhibaatooyinka dhinac kasta leh ee haatan taagan, xilligani xasaasiga ah.